Vaovao - Aza ampitaina amin'ny zazakely ny vavan'ny pathogenika
Ny rora dia mpitatitra mikraoba, ary ankehitriny maro ny fandalinana. Mandritra ny fitsaboana, na dia mbola tsy misy aza ny tsy fahazoana aina, ireo aretin-nify ireo koa dia faritra mikitroka izay misampana mankany Rirol, tsy azo ihodivirana eo amin'ny fiainany andavanandro ireo pathozena manokana ireo, ary "hiparitaka" amin'ny vavan'ilay zaza izy ireo. Tena very eo amin'ny tsipika fiandohana. Ny mpikarakara dia mety manaparitaka ny pathogenesis ao am-bava amin'ilay zaza amin'ny alàlan'ny fandalovana ny lalana mankany am-bava Ny vao haingana mankany amin'ilay zaza, arakaraky ny andefasanao azy no ampiakaranao azy bebe kokoa. Noho izany, ny mpikarakara dia tokony hihaino tsara ny fahadiovan'ny sakafo ary mandinika ny fahadiovany am-bava. Mo dia mamelatra ireo otrikaretina amin'ny zazakely.
Tokony hikarakara ireto fihetsika manaraka ireto ny mpikarakara: aza mifanerasera amin'ny mpampitony ny zaza mba hahitana ny hafanan'ny tavoahangin-dronono amin'ny vavan'ny olon-dehibe. Aza atao ao am-bavan'ilay fitsarana ny sotro, ka fahano ilay zaza. Aza manoroka amin'ny vavan'ny zanakao. Aza atao sakafo ny zanakao aorian'ny fitsakoana sakafo, na zarao amin'ny zazakely ny takelaka
Ireo fitaovana fihinanan-jaza toy ny tavoahangy dia matetika tsy maintsy diovina sy diovina, raha tsy izany, ny zazakely dia hitondra ireo otrikaretina mankao amin'ny vatana, mitarika fivalanana, mandoa, mety hiteraka «thrush» koa. Marihina fa ny tavoahangy izay tsy ampiasaina ao anatin'ny 24 ora aorian'ny famonoana otrikaretina, dia mbola mila famindra indray, mba tsy hiteraka bakteria.
Torohevitra: ny mpikarakara dia tokony handinika ny fahadiovan'ny sakafo ary hanitsy ny fomba fihinanan-tsakafo ratsy.
Ity lahatsoratra ity dia nalaina avy amin'ny "Zavatra misy fiatraikany amin'ny ankizy - Fahasalamam-bava ho an'ny ankizy" (Tranonkala famoahana ny fahasalamam-bahoaka, 2019), Misy lahatsoratra sasany avy amin'ny tambajotra, raha misy ny fandikan-dalàna dia mifandraisa hamafa